Indlu enendawo yokuphola eBangalore kufutshane nesikhululo seenqwelo-moya - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola eBangalore kufutshane nesikhululo seenqwelo-moya
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguGayatri
UGayatri unezimvo eziyi-60 zezinye iindawo.
i-stam likhaya leholide elipholileyo elenzelwe nayiphi na intsapho, izibini, abahlobo okanye amagcisa kwindlela yokufumana i-mojo yabo. Kwindawo engaphandle eBangalore, ikunika into onokuyonwabela ye-esteryear eluhlaza eBangalore. Inemigangatho esemagqabini, indlu yamaplanga ekumgangatho ophezulu kunye nesakhiwo sayo samaplanga asemaphandleni itofotofo kwaye ifanele izibini ezithandanayo. Ungavuka uye kwiintaka eziphithizelayo, ii-peacocks & ngamanye amaxesha kwizilwanyana zethu zasekhaya ezinobuhlobo zikaNeo & Xena. Ababuki zindwendwe abahlala kufutshane baze bamkele iindwendwe ukuba zize nezilwanyana zabo zasekhaya.
i-stam yeyona ndawo ifanelekileyo onokuzikhuphela kuyo ngempela-veki.
Ithe nca ngaphakathi kwindawo yokuhlala engaphandle kweBangalore, esi sixeko sishiywe kude kakhulu nangona singenakufikeleleka. Eli pomakazi liye ladityaniswa kwinguqulelo yalo yangaphambili eyayakhiwe kusetyenziswa enye iteknoloji kwizinto zayo zokwakha eziphambili ezifana ne-bamboo, i-litestone, amaplanga kunye nomphantsi omibalabala. Iye yafakwa kwimagazini ethi “Ingaphakathi Elibhetele” ngenxa yezinto ezifuna ukulungiswa ngendlela ekhusela indalo kulawulo lwezixhobo nezinye iindawo zokuhlala ezingaqhelekanga onokukhetha kuzo, ezibuya ngo-2007. Eli pomakazi liphumelele ‘Umvuzo Ogqwesileyo Wendawo Yokuhlala ngempela-veki kwindawo ethi "Izinto Zangaphakathi Ezibhetele" ngo-2007 kunye ne- "JK Award yokusebenzisa izinto- Indawo Yokuhlala" ngo-2009
Ngoxa igcina uyilo kunye nomxholo wayo, i-astam kwiinguqu zayo ezintsha iye yahlaziywa yafikelela kwimigangatho ephakamileyo kwaye inemisebenzi yobugcisa be-rustic, ubukhulu becala iinkuni ezisemgangathweni, iibhotile njl njl. Uninzi lwezi zinto zenziwe yintsapho yababuki zindwendwe ukongezelela kwingqokelela yezinto abazifumanayo kuhambo lwabo oluqondayo.
i-asam inegadi eluhlaza kunye neendawo zokuhlala ezithi ndijonge. Le ndlu enamagumbi okulala ayi-2 inamacandelo ayi-2 akhethekileyo: Umgangatho ongaphantsi unegumbi lokuhlala, ikhitshi, ibhafu, i-foyer, indawo yokugcina izinto, elawula iiyadi kunye negadi. Umgangatho wokuqala yindawo yokuhlala etofotofo. Yakhiwe ngamaplanga aseKhanada, igumbi lokulala lenziwe kakuhle, nto leyo eyenza indlu yakho ibe nexesha elimnandi. Inendawo yokuhlala eyahlukileyo kunye nebhalkhoni elawula ibala elingezantsi. Ukuvuka uye kwigumbi elimuncis 'iintupha elangeni kuza kuba mnandi.
Igumbi lokulala lendlu yamaplanga linebhedi enkulu ibe linokuhlala iindwendwe ezimbini ngokukhululekileyo. Inegumbi lokuhlambela labucala elineendawo zeshawa nelanga lemvelo. Le ndlu yindawo esetyenziswa nangabanye abantu kwaye inxalenye yendlu "2 BR Villa kufutshane nesikhululo seenqwelo-moya". Le ndlu inekhitshi, igumbi lokuhlala kumgangatho osezantsi kunye nendawo yokutyela ye-cafe evulekileyo kwibala elikhulu apho unokufumana ithamo lakho le-caffeine, ukutya okanye uphumle ngeglasi yebhiya / iwayini ukonwabela indalo ejikelezileyo. Ikhitshi, indawo yokutyela evulekileyo, igumbi lokuhlala kunye nebala ziindawo ezisetyenziswa nangabanye abantu kunye neendwendwe eziphantsi. Igumbi lokuhlambela lelabucala yaye lahlukile kuwo omabini amacandelo.
Singakwazi ukwamkela iindwendwe ezongezelelekileyo (iindwendwe eziyi-3 xa zizonke) kwiimatrasi eziphantsi ngeendleko ezongezelelweyo zomntu ngamnye ngosuku.
Ukutya kwakho nekhitshi lethu
Ungakuvuyela njani ukuzola kunye nendalo @ astam ngaphandle kokutya kunye ne-unchies ngendlela oyithandayo? Yonwabela ukuphuma kwelanga kusasa kunye nekofu ecocekileyo okanye iti yaseIndiya kuyo nayiphi na indawo efanelekileyo kule ndawo- Igadi, igadi yangaphambili, iveranda esecaleni okanye indawo yokuhlala yabucala kumgangatho wokuqala opholileyo kwilanga eliorenji (into ethandwa yintsapho).
Iindwendwe zinokuoda ukutya kwi-intanethi/ kwiivenkile zokutyela ezikufutshane KODWA eyona ndlela ibhetele kunokuzama into oyaziyo okanye into entsha ekhitshini lethu! Indawo yokutya ekufutshane ikumgama wemizuzu eyi-5.
Yiza nokutya kwakho okanye ukutya, thina siza kukunika okunye.
1. "Phupha Ngekhitshi" kufutshane nebala elivulekileyo lesibhakabhaka ukuze upheke, wonwabe uze udibanise wonke umntu.
2. I-microwave eyi-1, ifriji
eyi-1 3. Iimbiza, iipani, izitya zokuphaka, indawo yokugcina ukutya, iipleyiti, imbiza yeti, isihluzi sekofu, iifolokhwe, amacephe, iimela zokupheka ezaneleyo kubantu abayi-6 ukuya kwabayi-8.
4. I-napoleon Pro barbeque grill yamatheko anee-tongs zokugaya inyama, i-Grill iqukwe namalahle asetwe ukuze akhanyise aze agrill ngeendleko ezongezelelweyo. Izinto ezifunwa ziindwendwe kufuneka zenziwe kwangaphambili ubuncinane kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokungena ukuze kuqinisekiswe ukuba ziyafumaneka.
5. Iquka iitawuli zasekhitshini, iziponji, izinto zokosula, izinto zokucoca ukuze ugcine ikhitshi elicocekileyo xa ugqibile.
6. Iinkonzo ezincinci zokucoca zifumaneka ngexesha lokuhlala. Iinkonzo zokucoca zasekhitshini, ukuhlamba izitya yinto onganyanzelekanga ukuba uyifake ngaphandle kweendleko.
7. Indawo yethu ayinazo izinto zokuhlalisa/zokuqhuba iindwendwe.
8. Sinokwamkela iindwendwe ezongezelelekileyo eziyi-1 (zizonke iindwendwe eziyi-3) kwiimatrasi eziphantsi ngeendleko ezongezelelweyo ze-Rs.1800/- umntu ngamnye ngosuku.
Izinto onokuzenza kufutshane
Ngelixa i-astm ngokwayo iyindawo entle yokurhoxa, umntu usenokwenza isicwangciso sokuhlola kufutshane. Izidiliya zaseKinvah kunye neGrover zikude nge-30 min. Ngaba ufuna ukutyelela isitali kwaye ukonwabele ukukhwela iponi yomntwana wakho? emva koko i-Embassy International kunye ne-equestrian isikolo si-10 min kude. Kwiqakamba / i-badminton / i-tennis kunye nabanye abathanda imidlalo, iziko le-Padukone-Dravid lokugqwesa kwezemidlalo li-10 min kude. Kwimiphefumlo enomdla, zibandakanye kwiParasailing, Paramotoring, Aeromodelling, Aerial Photography, Helicopter charter service, micro light flying sports at the Viking Aerosports, 25 min away @ Hebbal. Umntu unokucwangcisa uhambo lokuhamba intaba kwinduli ekufutshane yokukhwela intaba- iMakalidurga ekumgama we-20 min.
Abo bafuna ukuphonononga ilifa laseIndiya, unokucwangcisa uhambo lokuya kwisikolo soMdaniso saseProtima Bedi sikaNrityagram (imizuzu engama-30) okanye undwendwele iitempile ezikufutshane: Itempile yakudala yaseBhoga Yoga Nandeeshwara (imizuzu engama-45) kunye netempile yaseShri Ghati Subrahmanya (imizuzu engama-40).
Ngonyango oluhlaziyayo ungabhukisha kwindawo ye-spa yase-Angsana okanye uqhube uhle uye ezantsi kweyona Mall kunye nethiyetha ye-iMAX ekufutshane (15 min ukuya eRMZ galleria, Yelahanka)
Umbuki zindwendwe ngu- Gayatri
I am a travel enthusiast who loves to collect little things from different places, besides good memories and friends along the way. Have a flair for planning big events, fun vacations and being a great host. My corporate career was getting monotonous and I decided to quit with the dreams of pursuing my hobbies.
I have traveled to many places; experienced several cultures and acquired global acceptance for all ways of life. My Trouvaille have inspired me to host travelers from across the world to experience the true Indian culture staying at our home living like a local. I continue to travel and meet people and I now have another platform to open the world into my life by inviting people to stay at our home.
I am a travel enthusiast who loves to collect little things from different places, besides good memories and friends along the way. Have a flair for planning big events, fun vacati…
Sihlala emnyango kwaye siya kukwazi ukukuxhasa kwaye sikuncede ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho. Sifumaneka umnxeba kude ngexesha lokuhlala kwakho kwaye siya kuphendula kwiiyure ezi-2 ngexesha lonxibelelwano lokubhukisha kwangaphambili. Sinokukunceda ucwangcise iholide yakho e-Bangalore nakwiindawo ezikufutshane nalapho.
Sihlala emnyango kwaye siya kukwazi ukukuxhasa kwaye sikuncede ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho. Sifumaneka umnxeba kude ngexesha lokuhlala kwakho kwaye siya kuphendula kwiiyu…